Madaxweyne Xasan oo ku faraxsan kursi ka tuurista RW hore Cabdiweli Sheekh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, 6 Disember 2014 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xassan Sheekh Maxamuud, ayaa ka hadlay go’aankii maanta gaaray Baarlmaanka Federaalka ah ee Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa marka hore u mahad-celiyey dhammaan Xildhibaanada Baarlmaanka “Waxaan rabaa in aan u mahad celiyo dhammaan Xildhibaanada kuwa haa ku codeyey, kuwa maya ku codeyey iyo kuwa ka aamusayba, waxaan kale oo ku ammaanayaa ogolaanshaha ay ogolaadeen xeerka u degsan iyo sida ay ugu dhaqmeenba, Waxaan lee yahay ma jirto cid guuleysatay iyo cid laga guuleystay” ayuu yiri Madaxweynaha.
Madaxweynuhu wuxuu bogaadiyey Ra’iisal Wasaare Cabdiweli Sheekh iyo guud ahaan xubnaha Golaha Wasiirrada oo muujiyay dadaal muddadii ay xilka hayeen, ayaga oo ku shaqeynayay marxalad adag. Wuxuuna hey’adaha dowladda iyo shacabka Soomaaliyeedba ka codsaday in la siiyo xushmadda ay mudan yihiin.
Madaxweynaha wuxuu soo dhaweeyay sida ay awooda ugu yeehseen hayadaha dowliga in ay xaliyaan xaaladda siyaasadeed ee soo wajahay dalka iyadoo aanan dibadda laga soo faragelin. Madaxwaynuhu wuxuu ku amray hayadaha aminga in ay foojignaan dheeraad ah la yimaadaan, kana hortagaan cadowga umadda.
Madaxweynuhu wuxuu ummadda Soomaaliyeed u ballanqaaday in aan habac soo geli doonin habsami u socodka howlaha baaxadda leh ee Qaranka oo ay ka mid yihiin la dagaallanka Shabaab iyo xagjirnimada iyo sugidda amniga, wuxuuna si gaar ah u tilmaamay in howlaha leh mudnaanta koowaad oo ay ka mid yihiin dib u eegidda iyo Hirgelinta Dastuurka, dhammaystirka dhaqangelinta nidaamka Federaalka iyo doorashada 2016 oo dhammaantood ka mid ah Hiigsiga 2016 ay ku qabsoomi doonaan xilligii loogu tala galay.
Si taas loo xaqiijiyana, Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, wuxuu ballan qaaday in la tashi ka dib uu sida ugu dhakhsiyaha badan ee suurta galka ah ku soo magacaabi doono Ra’iisal Wasaare hanan kara howsha hortaalla Dowladda si loog dhabeeyo himilada Shacabka Soomaaliyeed.